Instagram အတွက် Cool Fonts - စတိုင်ကျသည့် Fancy Font | Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » Instagram အတွက် Cool Fonts - စတိုင်ကျသော Fancy Font
Instagram အတွက် Cool Fonts - စတိုင်ကျသော Fancy Font APK
သင့် Android ဖုန်းအတွက် Coolest Fonts! သင်၏အကောင်းဆုံးသောမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ Facebook မွမ်းမံမှုများ၊ Instagram Bio သို့မဟုတ် 140 + Special Fonts ဖြင့်တွစ်တာများကိုဖန်တီးပါ။
►အထူးသဖြင့်daѕdaadaυѕυdadadadaιι y y y y y y y y
►eeeяe။ ။ ။ ။ ►►►
►ကျွန်ုပ်တို့၏ 100 + အထူးဖောင့်များနှင့်အတူကြီးမားသောရုပ်ပုံအနုပညာ၊ ရုပ်သွင်အနုပညာဖန်တီးပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 140 + New Cool Text အားလုံးကိုယခုစမ်းကြည့်ပါ။ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့စာသားကိုရယ်စရာစာသားအဖြစ်ပြောင်းရန်အကောင်းဆုံးစာသားပြောင်းစက်များ!
ဖိုင်တွဲများ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ လုပ်ငန်းစာရင်းများစသဖြင့်သုံးပါ။ ပြက္ခဒိန်တွင်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများမွေးနေ့ကိုဖော်ပြရန်အထူးအဆက်အသွယ်များ၊ အဆက်အသွယ်ရှိအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများ၊ သင်၏လုပ်ဆောင်မှုစာရင်းထဲတွင်သင်၏လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အရေးကြီးသောအလုပ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ လူမှုကွန်ယက်အက်ပလီကေးရှင်းစသည့်အထူးဖောင့်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေကောင်းများကိုသင်၏ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များ၊ အကြံပြုချက်များကိုရယ်စရာစာတိုများဖြင့်မျှဝေပါ။
မက်ဆေ့ခ်ျကိုနေရာတိုင်းမှာသုံးနိုင်တဲ့မတူညီတဲ့ဖောင့်များစွာနဲ့သင့်ကိရိယာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ (အဓိကလူမှုကွန်ယက်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်)
ဤအထူးဖောင့်များသည် Unicode ကိုအခြေခံသည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများထံမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီးသည်နှင့်သူတို့တွင် app တွင်သူတို့ app တွင်မရှိသည့်တိုင်စာသားကိုတွေ့နိုင်သည်။ လက်ခံသူသည် Android စက်ကိုမသုံးပါကစာကိုစာသားဖြင့်တွေ့နိုင်သည်။ UNICODE ဖောင့်များသည်အဓိကပလက်ဖောင်းအားလုံး (Android, iOS & Windows Phones) ကထောက်ပံ့သည်။
ဒီဖောင့်ကို Instagram မှာသုံးပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျကိုအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ကူးယူပါ။ ထို့နောက်သင် Instagram App ကိုဖွင့ ်၍ သင်လိုချင်သည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကူးယူနိုင်သည်။
- 140 + လှပသောစာသား၊ နံပါတ်နှင့်အနုပညာစတိုင်များ
- မည်သည့် app တွင်မဆို Instagram ၏ floating စတိုင်များပေါ်ပေါက်လာသည့်ဖောင့်များ။
- မည်သည့် app သို့မဆိုလျင်မြန်စွာကူးယူ၊ မျှဝေပါသို့မဟုတ်ပို့ပါ။
- ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များကိုရောစပ်ရန် Composer ။
- အက်ပလီကေးရှင်းရှိ Instagram Bubble အတွက်ဖောင့်များကိုပိတ်ပါ။
- သင်၏ Instagram Bio နှင့်မှတ်ချက်များကို Pimp လုပ်ပါ
- ပိုကောင်းသော Facebook status message များသို့မဟုတ်အချိန်လေးများကိုရေးပါ၊ အကြိုက်များ၊ ပရိသတ်များသို့မဟုတ် retweets များပိုရယူပါ
- ချစ်စရာစာလုံးများဖြင့် Whatsapp သို့မဟုတ် LINE PROFILE ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
- ဂျီမေးလ်မှသို့မဟုတ်အခမဲ့ SMS မှ Textizer-Texts ပေးပို့ပါ။
✅“ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းက Accessibility ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ ” သင့်စာရိုက်ထားသောစာသားကိုအခြားအပလီကေးရှင်းများတွင်ရွေးချယ်ထားသောစတိုင်သို့ပြောင်းရန်သင့်အားကူညီသည်။
✅ Android 8.0 (Oreo) နှင့်အထက်ထုတ်ကုန်များသည် 140 + စတိုင်များကိုထောက်ပံ့သည်။ Android 7.1, 7.0, 6.0 နှင့် 5.1, 5.0 android ဗားရှင်းရှိသည့်သင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိဖန်သားပြင်များ၌ပြသထားသည့်စတိုင်များအားလုံးကိုသင်မတွေ့ရပါ။
✅အချို့သောအပလီကေးရှင်းများနှင့်စာသားရွေးချယ်ခြင်းမီနူးရွေးချယ်မှုသည်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ (ဥပမာ Redmi, Mi, POCO, VIVO, OPPO) ။
ယခု App ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ ခံစားပါ!
- ဤ update တွင် -
* အမျိုးမျိုးသောအမှားပြင်ဆင်ချက်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများ! ငါတို့သည်သင်တို့ဤ update ကိုကိုချစ်မျှော်လင့်ပါတယ်!
- အသစ်ပြောင်းခြင်းကို နှိပ်၍ Play Store တွင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအသစ်တစ်ခုချန်ထားပါ။
Instagram အတွက် Cool Fonts - စတိုင်ကျသော Fancy Font
10.72 ကို MB
စာသားမ Animation ရဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
Effect အနုပညာဆေးလိပ်သောက် ...
For Creator အတွက်…